तिथि मेरो पत्रु »3सुझाव तपाईं सिद्ध चिकी चुम्बक बनाउन!
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अप्रिल. 05 2020 |2मिनेट पढ्न
बिल्कुल केही काम गर्ने मानिसहरू हुन्, तर अझै पनि तिनीहरूले वास्तवमा ह्यान्डल गर्न भन्दा बढी महिला ध्यान रही अन्त. एक महिला मान्छे हुन सबै सम्भव कुराहरू प्रयास गर्ने पनि अरु पनि छन्, तर पनि एक महिला woo संघर्ष. तल दोस्रो श्रेणी सम्बन्धित मानिसहरूका लागि केहि सुझाव हो; यी सुझाव निम्न मानिसहरू एक केटी चुम्बक हुन के गर्नुपर्छ ठ्याक्कै के बुझ्न मदत गर्नेछ.
आँखा सम्पर्क गर्न सिक्नु
तपाईं एक प्राकृतिक केटी चुम्बक छैनन् भने, तपाईं आँखा को हरेक जोडी तपाईं निम्न देख्न आशा गर्न सक्दैन. त्यसैले, तपाईं मान्छे को एक समूह भरिएको कोठा प्रवेश, तपाईं पहिलो तपाईं रही छन् कति प्रारम्भिक प्राकृतिक ध्यान पत्ता लगाउन स्क्यान गर्नुपर्छ.
अरूलाई समातेर लागि मूर्खतापूर्ण केहि गर्न प्रयास नगर्नुहोस्’ ध्यान; आकर्षक महिलाहरु संग gazes लक गर्न यहाँ हो सम्झना र एक जोकर रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न छैन. तपाईं कोठा स्क्यान रूपमा, के तपाईं चासो देखाउने कम्तीमा एक पार्टी पाउन गर्नुपर्छ; तपाईं आफ्नो दंग हुर्काउन र तपाईं मा हँसिला देख्न भने, एक मुस्कान संग प्रतिक्रिया र सञ्चार केही तरिका को छ उनको पुग्न प्रयास.
के तपाईं आफ्नो टकटकी ताल्चा लगाउन कुनै भर आउन छैन भने के सोच वा तपाईं मा हँसिला छन्? त्यो तपाईं एक ढिलो नापयो स्क्यान लागि जाने भने के गर्ने संभावना छ. ज्यादातर महिलाहरु (कोठा नरमाइलो पहिले नै मानिसहरू उपस्थित पाउँछन् विशेष यिनै) बस कोठा प्रवेश गर्ने मानिस पर्याप्त योग्य छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन वरिपरि साह्रै खोजिरहनेछौं; यति, एक ढिलो स्क्यान तपाईं तिनीहरूलाई कम्तीमा एक संग आँखा सम्पर्क गर्न अनुमति दिन्छ.
यो प्राप्त, यो दिन छैन
यो प्रयास र विधि परीक्षण छ र; संसारमा सबै भन्दा ठूलो महिला हत्यारहरुको यो के र ठूलो परिणाम प्राप्त. महिला ध्यान प्राप्त गर्न, तपाईं तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्न सिक्न हुनेछ. उदाहरणका लागि, तपाईं चार वा पाँच समूह सबैभन्दा आकर्षक स्त्रीको तपाईं चासो देखाउन चाहनुहुन्छ भने, बस समूह हिंड्न र तपाईं लोभ्याउन गर्न चाहनुहुन्छ एक बाहेक सबै बालिका कुरा.
महिला, जतिसुकै आकर्षक वा विश्वस्त तिनीहरू हुन्, बस उपेक्षा गर्ने घृणा. तिनीहरूलाई शून्य ध्यान दिनु तिनीहरूले आफ्नो कृतज्ञता जीत कुराहरू गरेर सुरु हुनेछ अर्थ.
प्रश्न सोध्ने तयार हुनुहोस्
तपाईं पहिलो पटक एक महिला भेट्दा, बरु आफ्नो बारेमा कुरा को, उनको प्रश्न सोध्न. बावजूद आफ्नो उमेर को महिला, शैक्षिक पृष्ठभूमि र पेशा बस आफूलाई बारेमा कुरा गर्न मन. त्यसैले, तिनीहरूले एक असल श्रोता हो जो कसैलाई भेट्न जब तिनीहरूले तथ्य प्रेम; केटी चुम्बक सामान्यतया संसारमा सबै भन्दा राम्रो श्रोताहरूले हो.
उनको सोख बारेमा सोध्छन्, उनको सपना, र सम्पूर्ण उनको जीवन; त्यो कुरा गर्नेछन्, भाषण र कुरा. तपाईले उनले एक सुझाव माग्यो र तपाईं वास्तवमा गर्न को लागि सुन थिए तपाईं प्रदान गर्न सक्दैन भने यो शर्मनाक हुन सक्छ ध्यान भनिरहेको छ जो सुन्न पक्का उनको.
बस देख र राम्रो महक भन्दा एक थप गर्न आवश्यक एक केटी चुम्बक हुन कि शो माथिको सुझाव. पहिलो लोभ्याउने व्यक्तित्व हुनुपर्छ महिला ध्यान मान्छे प्राप्त गर्न; सबै अन्य गुणहरू अर्को आउन.
के तपाईं लजालु हुनुहुन्छ भने महिला दृष्टिकोण कसरी?
कुकुर पार्क देखि केटासित कसरी
शीर्ष5एक तिथि गर्न ढिलो हुँदा लागि बहाना